Madaxweynaha Soomaaliya oo Magacaabay Gudi la hadla maamulka Soomaaliland – SBC
Madaxweynaha Soomaaliya oo Magacaabay Gudi la hadla maamulka Soomaaliland
Madaxweyne shariifka Dowlada KMG ah ee Soomaaliya Ayaa Maanta ka amba baxay Magaalada Muqdisho xarunta Dalka, waxaana uu u kici timay dhanka Magaalada Adis ababa halkaasi oo uu ugaga qeyb gali doono kulanka madaxda Midowga Africa oo ka dhacaya magaaladaas.
Intii uusan ka amba bixin magaalada Muqdisho madaxweyne shariif waxa uu magacaabay gudi heersare ah oo ka kooban wasiiro ka tirsan Xukuumada FKMG ah kuwaasi oo wada xaajood la galaya Maamulka Soomaaliland.
Wasiirka Arimaha Gudaha DKMG ah, Cabdi Samad Macalin Maxamuud ayaa gudigan gudoomiye logaga dhigay waxaana ay ka kooban yihiin 5 xubnood iyadoona ay jiraan xubno dhiman oo aan weli la magacaabin.
Waxa ay kala yihiin 5ta xubnood ee loomagacaabay la xaajoogta Maamulka Soomaaliland.
1, Gudoomiyaha Gudiga ahna wasiirka Arimaha Gudaha DKMG ah C/samad Macalin Maxamuud Faarax.
2, Wasiirka Arinmaha Dibada DKMG ah
3, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta DKMG ah
4, Wasiirka Maaliyada DKMG ah iyo
5, Wasiirka howlaha guud ee DKMG ah .
Magacaabista Gudigan ayaa ka dambeysay ka dib markii todobaad ka hor uu isagana ku dhawaaqay gudi heer wasiir ah madaxweynaha Maamulka Soomaaliland kuwaasi oo ay howshoodu noqondoonto wada hadal iyo wada xaajood ay la galaan DKMG ah ee Soomaaliya.
Talaabooyinkan ay qaadeen Madaxda Maamulka Soomaaliland iyo kuwa DKMG ah ee Soomaaliya ayaa noqonaya kuwo waji cusub u furaya ra’yigii ahaa goosashada maamulka Soomaaliland ee ay qabeen Masuuliyiinta iyo Shacabka ku dhaqan waqooyi galbeed Soomaaliya.